Mageia 6 ichaonekwa iyi 2017, asi hazvizivikanwe kuti ichave riini | Linux Vakapindwa muropa
Mageia 6 ichaonekwa iyi 2017, asi hazvizivikanwe kuti ichave riini
MunaJune 2016 yekutanga snapshot yeMageia 6. yakaburitswa.Mwedzi yakati gare gare, vhezheni itsva yakagadzwa yakaburitswa asi yakanga isiri Mageia 6 asi yaive Mageia 5.1. Iyo yakagadziridzwa vhezheni yebazi 5, asi Uye Mageia 6? Chii chakaitika kune iyo Mageia vhezheni?
Mageia kugovera kwakazvarwa kubva Mandrake chirongwa, icho chakakamurwa kuva Mageia uye OpenMandriva. Iyo yekupedzisira inoenderera uye Mageia futi, kunyangwe ivo vasina hupenyu hwakawanda munguva pfupi yapfuura.
En iyo yepamutemo Mageia blog, Avo basa rokupa vachangotanga kubudiswa kuti iyo vhezheni itsva ichaburitswa mu2017, pamwe neMageia 7, iyo ichave iri mukugadzirwa mushure meMageia, kunyangwe iyo yekupedzisira ichizozvisunungura kubva kuMageia 6. Chikwata chinodemba kuti hachina kukwanisa kuburitsa vhezheni nenguva.
Kunonoka kweMageia 6 kwave kuri pakati pezvimwe zvinhu kune dambudziko rekuparadzanisa raivepo
Munguva ino, kunyangwe pasina shanduro dzekuvandudza, Ehe, pakave nekugadziriswa kwetsikidzi uye kuiswa kweshanduro nyowani, asi chakakosha chinhu chavakaita kugadzirisa dambudziko rakakomba raive nekuparadzaniswa.
Iri dambudziko rakabvisa zvikamu uye zvave zvakaoma kugadzirisa asi zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti zvatogadziriswa. Ndokusaka zvichitaurwawo kuti kuvandudzwa kweMageia 7 hakuzove kwenguva yakareba sekuvandudzwa kweshanduro iyi, nekuti matambudziko avari kusangana nawo haatarisirwe mune ramangwana.
Chero zvazviri, hapana munhu anokwanisa kuti kugovera kwacho hakuna matambudziko akakomba saka pamwe Mageia 7 kana Mageia 8 vane kumwe kunonoka mukarenda yavo. Asi chinhu chakanaka pane izvi kuziva kuti kugoverwa kweMageia kunoenderera uye kuti Mandrake kana Mandriva uzivi hunoenderera mukati meGnu / Linux Nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mageia 6 ichaonekwa iyi 2017, asi hazvizivikanwe kuti ichave riini
Iko kune kufambira mberi kutsva mune izvi. Sekureva kwenhau dzichangoburwa, vachakurumidza kuburitsa Sta 2, uye vachazomhan'ara vhiki nevhiki pamusoro peshanduro iyi nyowani uye zvimwe zvinhu kuitira kuti nharaunda ive neruzivo.
Kumirira kuti ibude ndinochengeta neMageia 5.1 iyo yakanyatsogadzikana. Ndinokurudzira munhu wese kuti aedze.
Youtubers Hupenyu kukakavara paLinux
PDXCON Stockholm inovhura mikova yayo kekutanga muna 2017